Nsɛm a efi Amerika
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Nsɛm a efi Atɔe Fam Nsase so ma yehu mfaso a ɛwɔ Bible mu afotusɛm so.
Wohwɛ Wo E-mail Pii a, Ebetumi Ahaw Wo Anaa?
Nhwehwɛmu bi a wɔyɛe wɔ Vancouver, Canada kyerɛ sɛ, sɛ nkurɔfo tew mpɛn dodow a wɔde hwɛ wɔn e-mail so na wɔhwɛ no bɛyɛ mprɛnsa da koro a, wɔn adwinnwen so betumi atew. Kostadin Kushlev a odii nhwehwɛmu no anim no kaa nea wohui no ho asɛm sɛ: “Ɛyɛ den ma nnipa bebree sɛ wɔbɛtew mpɛn dodow a wɔde hwɛ wɔn e-mail so, nanso sɛ wotumi tew so a, ɛbɛtew wɔn adwinnwen so.”
SUSUW HO: Yɛte “mmere a emu yɛ den” mu, enti sɛ biribi bɛboa yɛn ma yɛatew yɛn adwinnwen so a, wunnye nni sɛ ɛsɛ sɛ yegye tom de yɛ adwuma?—2 Timoteo 3:1.
Ɛpo mu Nam Asan Adɔre
Amanneɛbɔ a Adwumakuw bi a wɔbɔ nsumnam ne wuramnam ho ban de too gua kyerɛ sɛ, “Wɔahu sɛ po mu nwaw, mmɔnkɔ, ne mpataa asan redɔre bio fi bere a aban barae sɛ mma obiara nyi nam wɔ po mu mmeae pɔtee bi no.” (Wildlife Conservation Society) Wei kɔɔ so wɔ Belize ne Caribbean mmeae ahorow. Ɛtoa so sɛ: “Sɛ wode po a woyi mu nam toto nea wɔabara emu namyi ho a, wubehu sɛ nea wɔabara emu namyi no tumi dɔre wɔ bɛyɛ afe 1 kosi mfe 6 ntam. Nanso sɛ ɛpo no betumi asi ne dedaw mu bio koraa a, ɛno deɛ, ebegye mfe pii.” Asɛm a ɔpanyin a ɔda kuw no ano, Janet Gibson ka faa Belize ho ni: “Ɛyɛ nokware turodoo sɛ sɛ aban bara po mu nnamyi a, ɛbɛboa ma mpataa ne po mu nnam adɔre bio.”
SUSUW HO: Sɛ wohwɛ sɛnea ɛpo mu nnam ase tumi dɔre bio no a, ɛnkyerɛ wo sɛ Ɔbɔadeɛ nyansafo bi wɔ hɔ anaa?—Dwom 104:24, 25.
Awudisɛm a Ɛrekɔ so wɔ Brazil
Dawurubɔ adwuma a wɔfrɛ no Agência bɔ amanneɛ sɛ, awudisɛm renya nkɔanim wɔ Brazil. Wɔ afe 2012 mu no, nnipa bɛboro 56,000 na wokunkum wɔn. Asoɛe a ɛhwɛ Apɔwmuden so bɔ amanneɛ sɛ, ɛno ne afe a wodii nkurɔfo awu paa. Luís Sapori yɛ ɔmanfo bammɔ ho ɔbenfo. Ogye di paa sɛ awudisɛm a adɔɔso no kyerɛ sɛ nkurɔfo bra asɛe. Ɔkaa sɛ, sɛ nkurɔfo mfa ɔman mmara nyɛ hwee a, “ɛma wodi akakabensɛm.”
WONIM? Bible ka too hɔ sɛ bere bi bɛba a nnipa dɔ “ano bedwo” na amumɔyɛ adɔɔso.—Mateo 24:3, 12.
Mmea ne Mmarima Ntam Nsɛm
Wiase Nsɛm—Nea ɛrekɔ so wɔ Europe
Wiase Nsɛm—Middle East